H Thayela i-Ceramic Ignition Electrode for Burner China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Spark Plug Insulator > Ignitor Insulator of Household Electrical Appliances > H Thayela i-Ceramic Ignition Electrode for Burner
Lo H Uhlobo lwe-electrode lokushisa i-ceramic luhlangene nomzimba wokushisa we-electrode ceramic nge-pin / rod rod electrode ensimbi. Zonke izinhlobo ze-H ze-insulator ye-ceramic zine-smooth glazing surface ukuze zikhulise amandla okuqapha. Sinikeza izinhlobo eziningi ezijwayelekile ze-electrode yokushisa, futhi sisekela imininingwane ekhethiwe.
Amandla aphezulu asebenzayo, ukufaka ukugesi kagesi, ukungabi namaphutha, ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nokuphakama kwezinga eliphezulu, nokulinganisa okulinganayo.
Isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo ze-oven gas, cooker gas, amanzi gasheater, gas grill, gas BBQ, njll.
Izindlela zokukhiqiza ezikhethiwe zifaka ukucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-isostatic, ukufaka umjovo we-ceramic, i-extrusion ngokukhethwa kwezinsiza. Futhi, sinakho ukucubungula okucacile okucubungula nokuqhutshwa komshini wokukhiqiza. Njenge-metallizing, i-glazing, ukugaya okuhle, ukufakelwa kwe-CNC, ukusika kwe-laser njalonjalo.